Expert Expert momba ny hosoka amin'ny aterineto - Ahoana & Ahoana
Mitombo ny fihanaky ny hosoka an-tserasera. Ankehitriny rehefa mijery an'io monitor ianao ianaoTsy afaka milaza izay tena izy ary iza no mpangalatra. Izy ireo (ireo lehilahy ratsy) dia nianatra nanamboamboatra ny tenany ary nandà ny olona an'arivonyfiadanan-tsaina amin'ny alàlan'ny fanoherany.
Na izany aza dia afaka miaro tena ianao. Mora: mifankazà amin'ny mahazatrafanesoana an-tserasera - used metal bar sets for sale. Jason Adler, manam-pahaizana avy amin'ny Semalt ,Mino izany fa hitazona ny fampahalalana tsiambaratelo, ny antsipirian'ny banky, ary ny vola azo antoka.
Tsarovy mandrakariva ny tsy handefasana vola na hamoaka tsipiriany momba ny carte de crédit amin'ny olona izay tsy fantatrareo na atokisana.
Ny tranonkala fifaneraserana dia nanampy olona an'arivony hahita ny fitiavana. Indrisy, singa ratsy vitsivitsydia nanipaika an-tserasera an-tserasera. Mitandrema. Ny tranga mampiahiahy dia miseho amin'ny tranokalan'ny namana sy ireo izay noforoninaOlona tsy manonofy mandositra. Izao no mitranga:
Amin'ny tranonkala sandoka (izay mandalo ho an'ny olom-pirenena iray), ny fiampangan'ny mpangalatra anaomamorona kaonty, hookup ary mifandray amin'ny namana tia / mpiara-miasa. Mba hisorohana izany, tsidiho ny fanadihadihana momba ireo tranonkala ahafantarana izay fantatraoTsara sy tsy misy izany.
Amin'ny tranonkala ara-dalàna, mamorona kaonty ny mpangalatra. Handeha hody izy ireoaoka ho liana aminao, fa raha ny tena izy dia tsy misy tsara. Ho entin-dry zareo havana na trangam-paharetana izay ilainy vola izany:ampahany izay hangatahan'izy ireo anao hisintonana azy. Amin'ny tranga hafa dia mety hiantehitra aminao amin'ny fanomezam-pahasoavana izy ireo, dia mangataka ny antsipirian'ny bankinaomiaraka amin'ny fampanantenana handefa vola anao.
Io no tena karazana mailaka sy tranga an-tserasera. Hahazo mailaka na ianaohafatra ao amin'ny kaontinao media sosialy mampahafantatra anao fa nahazo loka ianao izay azonao lazaina raha mandoa na manome ny antsipiriany momba ny carte de crédit ianao.Hiezaka mafy izy ireo handresy lahatra anao fa adidy hetra na zavatra toy izany..Aza mety hofitahina ianareo. Loza izany. Famitahana izany. Raha ianaotsy nandray anjara tamin'ny loteria, sweepstake na ny fiantrana dia mitandrina.
Io dia mameno ny mailakao. Ao anatin'io tranga io dia mety ho liana amin'ny hoe liana ny olona irayny vokatra / ny tolotra, na izany dia mety ho fikambanana iray liana amin'ny fanaovana raharaham-barotra miaraka aminao. Raha mangataka vola izy ireo hanampy azy ireo handinikafanonerana amin'ny fiafaràny, dia mety ho tafintohina tampoka ianao. Indraindray, mangataka ny antsipirian'ny bola izy ireo na dia amin'ity tranga ity aza,Mody tahaka ny banky ry zareo na ny fikambanana ara-dalàna mifandray aminao matetika. Aza atao tsindry amin'ny rohy raha tsy antsoina hoe banky ianaomba hanamafy izany. Ankoatr'izany dia mety hitranga amin'ny tranganà fandoavam-bola be loatra izay omen'ny mpividy iray ny fanamiana vola ho an'ny serivisy.Hangataka vola avy aminao ry zareo.
7) Ny ohatra tsara dia ny "asa avy any an-trano" izay mampanantena an'arivonydolara amin'ny asa kely. Amin'ny toe-javatra hafa, dia azo antoka fa asa tsara ianao miaraka amin'ny karama aroanao. Misy ny fisambotra anefa. Tsy maintsy mandoa lamandy ianaomiaro ny asa. Aza mamoy ny volanao amin'ny trangan-javatra toy izany.
Buy / sell auction scam
Ny olona mifikitra amin'ny fividianana entana an-tserasera sy ny fika, dia misy tranga iray:ny fividianana mivarotra / varotra. Rehefa manolotra vokatra iray ianao ary tsy mahazo ny tanjona dia mandeha amin'ny raharahanao. Avy eo dia mahazo antso avy amin'olona ianaomilaza ny mpihazakazaka mpandresy, ary ankehitriny dia azonao ny volanao. Inona no tadiavin'izy ireo? Manao raharaham-barotra ivelan'ny sehatra (tranonkala). azasahy manao izany. Hanjavona ny volanao ianao, ary tsy hahazo ny vidiny (na inona na inona tadiavinao).
Ao amin'ity scammer an-tserasera ity, ny mpihaza alika dia mampiseho ny sakaizany izay izy / izyfivarotana. Maniraka ny antontan-taratasy fisoratana anarana sy sary maro izy ireo. Ho famaranana ny fifanarahana, dia angatahana ianao handoavana ny saram-pandefasana izay ho avyavereno averina. Amin'ny farany, mandoa vola ianao, ary tsy hahazo puppy ianao. Ny tsipika nomeny koa dia tsy voavaly.